विद्यार्थीहरुको चौतर्फि विकासमा समर्पित छ निब्सः प्रिन्सिपल महत्तो (भिडियो सम्बाद) | KTM Khabar
विद्यार्थीहरुको चौतर्फि विकासमा समर्पित छ निब्सः प्रिन्सिपल महत्तो (भिडियो सम्बाद)
२०७३ पुस २८ गते १५:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौँको मण्डिखाटारमा रहेको नेशनल आईडिएल बोर्डिङ्ग हाई स्कुल "निब्स"का फाउण्डर /प्रिन्सिल डि.एन. महत्तोसंग केटीएम खबरले समग्र शिक्षा क्षेत्रको कुराकानी र निब्सले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याई रहेको योगदान विषयक एक विशेष सम्वाद गरेको छ ।
प्रस्तुत छ डि.एन. महत्तोसंग केटीएम खबरका लागि श्याम कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरलाई केटीएम खबर डट कमको विशेष सम्वादमा विशेष स्वागत छ
के छ सर अहिले व्यस्तता, दौडधुप ?
अहिले स्कुलको तेश्रो टर्मिनल इक्जामनेशन भईरहेको छ । त्यसमा अहिले व्यस्त भईरहेका छौँ । त्यस पछी विदाको कुरा छ र कपी चेकिङ्ग देखि लिएर रिजल्ट मिलाउने कुराहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस पछी सरस्वती पुजा आउँछ र त्यसका लागि गरिने कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छौँ ।
केहि समय अगाडी नै यहाँले हिज्जे प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुभयो, अलिकती त्यस प्रतियोगीतालाई सम्झौ न कसरी सम्पन्न गर्नु भयो ?
हामीले बर्षेनी हिज्जे प्रतियोगीता गर्दै आएका छौँ जुन चाही उपत्यका व्यापी गरिने कार्यक्रम हो र निब्सले गर्ने राम्रो कार्यक्रम मध्यको एक हो ।
हिज्जे प्रतियोगीता भर्खरै मात्र हामी सुसम्पन्न गरेका छौँ । धेरै स्कुलहरुको सहभागिता थियो र विद्यार्थीहरुले पनि राम्रो तयारी गरेर आएका थिए । जसको फलस्वरुप विद्यार्थीहरुको आफुमा रहेका स्पिलिङ्ग पावर देखाएको हामीलाई अनुभुत भएको छ ।
के रहेछ सर प्रिन्सिपलको कुर्सि भित्रको जिम्वेबारी ?
ठुलो जिम्वेबारी हुँदो रहेछ । प्रिन्सिपलको कुर्सिम बसि सकेपछी प्रिन्सिपलले आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि एउटा संस्थाको स्वार्थ र संस्थामा संलग्न जति पनि व्यक्तिहरु वा स्टाफहरु भनौँ वा विद्यार्थी, अभिभावक र समाज पनि जोडिएर आम रुपमा आसन ग्रहन गर्ने एउटा थलो हो र सबैको कुरा बुझेर अगाडी बढ्दै जानु पर्छ, काम गर्दै जानु पर्छ ।
समाजसंग जोडि रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत जीन्दगी हुँदो रहेछ की हुँदैन रहेछ, के अनुभुत गर्नुहुन्छ ?
व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो विचार, अनुभव हुन सक्छ तर मेरो विचारमा भनको यो मैले रोजेको नै यही क्षेत्र हो र आफुलाई यसमा रमाउन मन लाग्छ, खेल्न मन लाग्छ ।
यस क्षेत्रमा नै विभिन्न रमाईलो अनुभुती लिएर म रमाईरहेको हुन्छु म ।
यदि सर शिक्षा क्षेत्रमा नआउनु भएको भए अन्य ठाँउको परिकल्पना गर्न सक्छौँ ?
मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा म जसरी भए आउथे र आए । यदि म शिक्षा क्षेत्रमा नलागेको भए म आफ्नो पुर्खाले गर्दै आएको खेती, किसानी अथवा व्यापार गर्थे होला । जीबन त्यसै चल्दैन । त्यसका लागि पनि कहि कतै लाग्थे होला ।
त्यसैको निरन्तरता स्वरुप हो निब्स स्कुल ?
यो शिक्षाको मन्दिर निर्माण भयो । यसमा सबैको सहयोग र साथ पाएको छु । अभिभावक देखि समाजको पनि साथ पाएको हुनाले मैले आजको अवस्थासम्म निब्सलाई यहाँसम्म ल्याउन सकेको छु ।
स्कुल चलाउन सहज अथवा गाह्रो के हुँदो रहेछ ?
कुनै पनि कार्य हेर्ने व्यक्तिले जति सहज ठान्छ तर गर्ने व्यक्तिलाई त्यति सहज हुँदैन । गाह्रो त गाह्रै हुन्छ तर गाह्रो हुदैमा कुनै पनि काम नगर्नु त्यो कायरता हो र मान्छे पछी पर्छ । उ अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले प्रगती पथमा लाग्नका लागि केही न केही गरि रहँनु पर्छ, जस्तो साह्रो, गाह्रो भए पनि डटेर सामना गर्नु पर्छ किनभने आफुलाई जुन कार्यमा अनुभव छ मानौ त्यो गाह्रो भयो भनेर छाडिदियो भने छ अर्को कामका लागि त सुरु देखि नै काम गर्नु पर्छ नी । आखिर पछाडीको पछाडी परिन्छ । त्यस कारण जहाँ आफु भइन्छ त्यहाँ डटेर संघर्ष गर्नु पर्छ ।
डि. एन. महत्तोसंगको थप भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको लिंकमा जानुहोसः